BAYDHABO: CARRUURTA AGOONTA IYO SABOOLKA AH OO U SHAQEEYA QOYSASKOODA | Gaaloos.com
Home » Layaab » BAYDHABO: CARRUURTA AGOONTA IYO SABOOLKA AH OO U SHAQEEYA QOYSASKOODA
Cali Abshir Ibraahim waa 14 jir ka shaqeeya garaash baaburta lagu sameeyo oo ku yaalla xaafadda Mursal ee magaalada Baydhabo. Wuxuu qabtaa shaqooyin ay ka mid yihiin qorista biraha baabuurta, dhalaalinta macdanta iyo alxanka. Shaqadan ayuu billaabay markii uu isagoo 10 jir ah geeriyooday aabbihiis, markaas oo uu ka soo tegay miyiga oo uu weli qoyskiisa ku nool yahay si uu Baydhabo uga shaqeeyo.
“Carruurtan waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho iyo daryeel beddelkii ay shaqeyn lahaayeen,” ayay tiri Luul Isxaaq Aadan oo ah madaxa Xarunta Daryeelka Carruurta Waddooyinka ku dayacan. Waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in aabbeyaasha geeriyooday iyo saboolnimada ay ugu wacan tahay inay carruurtan shaqeeyaan.
Title: BAYDHABO: CARRUURTA AGOONTA IYO SABOOLKA AH OO U SHAQEEYA QOYSASKOODA